कोषको रकमलाई मुलुकको आर्थिक विकास,रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गछौं : प्रशासक गौतम - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
तुलसीप्रसाद गौतम कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक हुन । नेपाल सरकारको सहसचिव रहेका गौतम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गत बैशाखमा प्रशासकमा छानिएका हुन । यसअघि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा रहेर काम गरिसकेका गौतमसँग कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउने के–कस्ता योजनाहरु छन् । यिनै विषयमा अर्थको अर्थले गरेको कुराकानीको केही अंश :
कर्मचारी संचय कोषको वर्तमान वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
कोष पूँजी संरचनाको आकारमा हेर्ने हो भने देशकै सबैभन्दा ठुलो वित्तिय संस्था हो । अहिले झन्डै ३ सय खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा कोषमा रकम जम्मा छ । अहिले त्यसको अलि ठुलो हिस्सा विभिन्न सापटीहरु मार्फत कर्मचारीहरु मै गएको छ । केही बायुसेवा निगम, उर्जा परियोजना, बैंकको सेयर, उद्योग लगायतका क्षेत्र सहित सरकारको विकास कोषमा पनि लगानी गरेको छौ ।
यसरी हेर्दा अहिले कोषको लगानी छरिएर रहेको आवस्था छ । र, केही रकम आवास निर्माणमा पनि गएको छ । मुलत यिनै क्षेत्रमा हाम्रो लगानी भएको छ । तर, अव एउटा निश्चित तहको प्रतिफल प्राप्त हुने मुलुकलाई आवश्यक परेको लगानीका क्षेत्रहरु पूर्वाधार विकास लगायतमा अझ बढी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु ।
सरकारले लगानीका लागि पहिल्याएको र उपयूक्त ठानेको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेर जाने योजानमा छौं । साथसाथै नीजि क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि मिलेर अघि बढ्न तयार छौं । जसको कारण संचयकर्ताहरुलाई पनि केही प्रतिफल प्राप्त होस् र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोगी बन्न सकौ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फण्डको परिचालनका सन्दर्भमा कोषले समेत चासो देखाएको छ, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?
अहिले कोषले गरिरहेको काम र सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फन्ड उस्ता उस्तै प्रकृतिको हो । हामीले अहिले पनि सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, निजामती सबैको संचयकोष व्यवस्थापन गरिरहेको हुनाले सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फण्ड संचालनमा पनि हामीलाई विश्वास गर्छ भन्ने आशामा छौं । साथ–साथै हामी पनि यो व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं । हामीसँग अहिले नै भएको जनशक्ति, श्रोत साधन र पुर्वाधारबाट नै फण्ड चलाउन सक्षम छौं भन्ने कुरालाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसंगको छलफलमा हामीले जानकारी गराइसकेका छौं ।
लामो समय पश्चात कोषको ऐन संशोधन पनि भएको छ । यसले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउन कस्तो मदत गर्छ ?
पक्कै पनि विगतमा हामी सिमित थियौ । सिमित भन्नुको अर्थ सरकारी कार्मचारी, शिक्षक, प्रहरीहरुको मात्रै कोष व्यवस्थापन गथ्यौं । तर पछिल्लो समय कोषको ऐन संशोधन पश्चात विभिन्न संघ, संस्था, स्वारोजगारसंगै बैदेशीक रोजगारीमा भएका नेपालीहरुको पनि कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं । त्यो क्षेत्रमा पनि हामी विस्तारित भइरहेका छौं । त्यस्तै अहिले सरकारले नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार मजदुर, कर्मचारीहरुको पनि अनिवार्य संचयकोष गर्नु पर्ने भन्ने नीति आईरहेको सन्दर्भमा हामीलाई आवद्ध हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
यसका अतिरिक्त हामी अहिले निकट भविष्यमा बैदेशीक रोजगारीमा रहेकाहरुको पैसा कोष मार्फत भित्र्याउने र संचय गरेर राखी दिने, त्यसको परिचालन गर्ने र त्यो फन्ड परिचालनको काम भएपछि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेर उहाँहरु विदेशमा बस्ने बेलामा पनि उहाँहरुको आफन्तहरुलाई सहयोग पु¥याउने प्रकृया शुरु गरेका छौं ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?
कर्मचारी संचय कोष देशको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा रहेको छ । झन्डै ६ लाख भन्दा बढी हाम्रो संचयकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं । तर यो प्रर्याप्त छैन भन्ने महसुश गरेर नै नयाँ ढंगले काम गरिरहेका छौं । त्यो भनेको बीमा मार्फत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा मुलत ः हामीले कुनै कडा रोग लाग्यो भने ६ लाख , ठुलो बिरामी भएर अस्पतला भर्ना हुन परेको अवस्थामा ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने हिसावले बीमाको व्यवस्था गर्न लागेका छौं भने औषधोपचारको हकमा पनि कम्पनीमा १ लाख रुपैयाँ सम्मको बार्षिक खर्चलाई हाम्रो सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरि बीमा कम्पनी मार्फत त्यो प्रोडक्ट बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं ।
साथसाथै पहिले देखि नै नरिन्तर रहिरहेको प्रसुती खर्चका लागि साढे सात हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख २५ हजार, साथै किरिया खर्च ३० हजार रुपैयाँ, दुर्घटना भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था त छदै छ । यसलाई पनि निरन्तर गर्ने छौं । यो चाही कोष मार्फत नै चल्छ ।
नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने कुरा गरिरहदा अहिले नै कोषको काम गुनासो रहित भने हुन सकेको छैन । त्यसकारण सेवा प्रवाहमा तपाईहरुले खासै ध्यान दिए जस्तो देखिदैन नी ?
हामीले विगत लामो समय देखि नै कम्युटर प्रणाली मार्फत नै सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिदै आएका छौं । तर हाम्रो सेवा अझै पूर्ण डिजिटलाइज भइसकेको अवस्था छैन । अव भने छिटैनै आन्तरिक संरचना सुधारको काम अघि बढाउछौ । त्यो अन्तर्गत अहिलेको आइटिको सिष्टमलाई अपग्रेड गछौं । या भनौ त्यो भन्दा अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीस्य बनाउछौं ।
दोस्रो कुरा, अहिले हामी कहाँ भौचरहरु आएर पेन्डिङ गर्नुपर्ने आवस्था छ । त्यसलाई हल गर्न केही समयअघि मात्र हामीले निजामती कितावखानासँग सँगै काम गर्ने सम्झौता ग¥यौं । अव कुनै निजामति कर्मचारी नियूक्त भएर आउदा त्यो तथ्यांक पनि हामी कहाँ आइपुग्छ । संचयकोषको फारम पनि त्यही भरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाएर डिजिटल डाटा सेयर गर्ने योजना छ।
मैले अघि पनि भने सापटीमा हाम्रो धेरै रकम गइरहेको छ । यसका लागि काउन्टरहरुमा कर्मचारीहरुको ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ । यो समस्याको पनि हल गर्ने योजनामा छौं । त्यसका लागि जुन व्यक्ति जुन जिल्लामा काम गर्छ । त्यहाँको बैंक मार्फत एउटा निवेदन कोषमा पठाएर उसको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था र पाउने रकम पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धित खातामा राखिदिने ग¥यो भने हाम्रो काउन्टरमा भिड कम हुन्छ भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्छ ।
चार वर्षभित्र आठ हजार किलो मिटर सडक निर्माण गरिने
एसियन इनर्जी सेक्युरिटी फोरमको सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन सर्विया प्रस्थान
भारतीय बैंकको ऋण भारतमै भुक्तानी फछ्र्यौटलाई मात्र
चौथो बंलादेश एक्स्पो फागुन ११ देखि